अवसर - साप्ताहिक
के तपाईं पार्टटाइम कामको खोजीमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईंलाई काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ ? अब श्रीयोग डटकमले खोजिदिनेछ तपाईंले खोजेजस्तै काम र कर्मचारी । यसले काम र कर्मचारी मात्र होइन, आफ्नो समयको सदुपयोग गर्दै पैसा पनि कमाइ दिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
विदेशमा समस्या त धेरै छन्, तैपनि यहीँबाट खुशी लिएर जानेहरू पनि उत्तिकै छन् । युरोप–अमेरिकातिर त धेरै नेपालीले आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा आउने धेरै नेपाली विभिन्न कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले काम पनि सिकिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
विषयवस्तुका आधारमा भन्ने हो भने खासै फरक छैन । थोरै मात्र फरक छ । ए लेभलको असिसमेन्ट (परीक्षा प्रणाली) फरक छ । पढाउने तौरतरिका फरक हुने नै भयो । सबै कुरा असिसमेन्टमा भर पर्छ । ए लेभल पढेका विद्यार्थीहरू अलि खारिएका, माझिएका र सिर्जनशील हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा ए लेभल धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा पर्दै आएको छ । सन् १९८६ मा बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट यसको अध्यापन प्रारम्भ भएको हो । यतिबेला यो कोर्स नेपालका ३४ वटा कलेजले सञ्चालन गरिरहेका छन् । तीमध्ये विराटनगरको एक र पोखराका ३ कलेजले यो कोर्स सञ्चालन गरिरहेका छन् भने बाँकी सबै कलेज काठमाडौं उपत्यकामा छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र २५, २०७५
परीक्षापछि नयाँ–नयाँ ठाउँ घुमेर पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेका वा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण अन्य स्थान घुमघाम गर्नु राम्रो हुन्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा पढेका स्थानका बारेमा स्थलगत भ्रमण गरेर थप ज्ञान बटुल्नु उपयोगी मानिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि के पढ्ने र कहाँ पढ्ने ? यससँग सम्बन्धित सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । एसईईपछिको शिक्षा कुन कलेज वा कुन ठाउँमा पढ्ने सोच्न–बुझ्न थाल्नुपर्छ । यो समयमा धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिसँग भेटेर आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषयका परामर्श लिनुपर्छ । भविष्यमा कुन विषय रोज्ने, त्यसको प्रवेशसम्बन्धी प्रक्रियाहरू के–के छन बुझ्नुपर्छ ।पुरा पढ्नुहोस्
इन्स्टा सेलिब्रेटीका रूपमा परिचित प्रतिज्ञालाई इन्स्टाग्राममा प्रोमिस तामाङका नामले चिनिन्छ । इन्स्टाग्राममा उनको भेरिफाइड एकाउन्टलाई १३ लाखभन्दा बढीले फलो गरेका छन् । इन्स्टाग्राममा उनले पोस्ट गर्ने हरेक सामग्री लाखौं पटक हेरिन्छ भने हजारौंले त्यसमा लाइक तथा कमेन्ट गर्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
युट्युबले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार अहिले युट्युबका प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब ३२ करोड ५० लाख छ । युट्युबमा एक मिनेटमा ३ सय घण्टा बराबरको भिडियो अपलोड हुने गरेको छ भने दैनिक ४ अर्ब ९७ करोड भिडियो दैनिक हेर्ने गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नरेन्द्र रौले, पुस ४, २०७५
सोसल मिडियाका एडिक्टहरूले त त्योभन्दा बढी नै समय मोबाइलमा बिताउँछन् । गेम खेल्न, च्याट गर्न, कल गर्न मात्र होइन सोसल मिडियाबाट मनग्गे पैसा समेत आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि मात्र तपाईं यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ४, २०७३
पुरुष सौन्दर्य प्रतियोगिता अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धाको नेपाली संस्करणका रुपमा नयाँ प्रतियोगिताको घोषणा भएको छ– ‘म्यान अफ द इयर नेपाल २०१७’ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ २८, २०७३
आगामी फागुन ७ गते कान्तिपुर हिरो हाफ म्याराथनको सातौं सस्करण हुँदैछ । विगत ६ वर्षदेखि कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको आयोजना गर्दै आएको छ । पुरा पढ्नुहोस्